वैदेशिक राेजगारीका नाममा ५४ करोड ठगी ! – Sandesh Munch
वैदेशिक राेजगारीका नाममा ५४ करोड ठगी !
काठमाडौं, २८ असार । वैदेशिक रोजगारीका नाममा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म ५४ करोड रुपैयाँ ठगी भएको छ। ठगी रोक्न सरकारले सक्रियता बढाएको दावी गरे पनि ठगी रोकिएको छैन। ठगी गर्नेमा दलालभन्दा म्यानपावर व्यवसायी अत्यधिक छन्।
चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म दर्ता भएको तीन सय ३७ उजुरीसहित विगतदेखि थाती रहेका एक हजार एक सय ९२ जनाको ८० करोड ३६ लाख ६२ हजार आठ सय ९० रुपैयाँ ठगी भएको छ। यसमध्ये यो वर्ष उजुरी परेका एक सय ८७ जनाको १८ करोड ७७ लाख बिगोसहित विगतदेखि थाती रहेका तीन सय ९६ जनाको ४१ करोड ३४ लाख अदालतमा बिगो दावी गरिएको छ। संस्थागत रूपमा भएका ठगी छिटो छिनोफानो हुने गरी व्यक्तिगत ठगीका उजुरीमा समयमै सुनुवाई हुन नसक्दा कामदार मारमा परेका छन्। याे खबर अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।
Prevकाठमाडौंका घरबेटी भन्छन्- ‘छ महिनादेखि भाडा नदिँदा खानै समस्या भयो’
Nextखोलाले बखाएका रामबहादुरको शव भेटियो